China Rubber Pressure Bhegi yeBelt Vulcanizing Press Machine fekitori uye vagadziri | Antai
Rubha Pressure Bhegi yeBelt Vulcanizing Press Machine
Antai Rubber Pressure Bhegi inotora izere yerubber dhizaini, isina simbi furemu, isina huremu uye kumanikidzwa kunogoverwa zvakanyanya zvakaenzana, zvinobudirira uye zvinobudirira. Iyo inoiswa kune ese ari maviri kumanikidza kwemvura uye nemhepo yekumanikidza modhi. Iyo yakasununguka yakagadzirirwa uye kuvandudzwa naAntai's pachayo R&D nzvimbo. Hunhu uye mashandiro anoongwa zvakanyanya mumisika dzakasiyana siyana pasirese. Isarudzo yakanaka kuenderana neAlmex vulcanizing press zvakakwana.
Dhipatimendi rekambani yedu reR & D rakagara makore mashanu uye rakabudirira kugadzira rabha yepamusoro-mabhegi emvura muna2005. Iyi shanduko tekinoroji yakanyatsopidigura mhando dzese dzekutakura bhandi rinosanganisa tekinoroji uye yakanyatso shandura yekare-yechinyakare yekuchenesa yekudhinda ye hydraulic. Iyo yekubatana mhedzisiro inosvika kune nyowani kukwirira. "ANTAI" muchina unoburitsa une chinzvimbo chinotungamira mumakwikwi emusika neayo tekinoroji tekinoroji uye mhando yepamusoro.
1. Chitarisiko chakatsvinda uye chakatsvinda. Yese irabha yepamusoro-yekumanikidza bhegi remvura inoumbwa ne-chimwe-chidimbu cherabha vulcanization, uye ipapo hakuzovi nekudonha mukudzokorora kushandiswa.
2. Nemhepo yakakwira, inogona kuwedzerwa zvizere pasina yechipiri kumanikidzwa, izvo zvinogona kuve nechokwadi chekuti conveyor bhandi vulcanizer rakaenzana kumanikidzwa panguva yebhandi yekubatana uye yekugadzirisa maitiro. Iyo yakaedzwa chengetedzo yekumanikidza renji iri mukati me2.5Mpa, iyo inosangana zvizere nezvinodiwa zvevolcanizer joint.
3. Yakareruka dhizaini, huremu hwerabha yekumanikidza bhegi remvura inogadzirwa ne "Antai" inongova chikamu chechina cheyakare mvura yekumanikidza ndiro, uye inowedzera kupfuura yekare mhando mukuwedzera kwemuviri, mabhaudhi ekugadzirisa pamativi ese maviri anongoda kusimbiswa. zvinyoro-nyoro newrench paunenge uchiisa iyo michina.
4. Iyo yekumanikidza renji yakakura. Iyo yerabha yekumanikidza yemvura bhegi inogadzirwa ne "Antai" ine chete 1.5CM furemu yakatenderedza, zvichienzaniswa neinopfuura 5CM furemu yeyakare mvura yekumanikidza ndiro, iyo inonyatso kuwedzera iyo yekumanikidza nzvimbo uye inovandudza iyo vulcanization mhando.
Sayenzi yakareruka chimiro
Kunyangwe, inoshanda & inoshanda kumanikidza kugovera
Yakavimbika, yakasimba uye inochengetedza simba
Size uye divi customized
Pashure: Cold Bond Cement yeRubber Conveyor Belt Kutsemura Adhesive
Zvadaro: DB-G mhando Simbi Cord Conveyor Belt Peeling Machine yeSplicing
Mhepo yekumanikidza mvura yakanyorova vulcanization muchina
Rail-yakakwira Spot Kugadzirisa Vulcanizing Press ye ...
Yakareruka Vulcanizing Press yeChiedza Rubber ...
Edge Kugadzirisa Vulcanizing Press yeRubber Convey ...
PU PVC Belt Vulcanizing Press ye Thermoplastic ...
Conveyor bhandi inobvisa muchina wekutsva